जान्नुहोस मधुमेह के हो ? कसरी बँच्ने ? - Khabar Break | Khabar Break
अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघले सन् १९९१ देखि मधुमेहले स्वास्थ्यमा पार्ने असर बारेमा जानकारी दिन यो दिवस मनाउन थालेको हो । हरेक १० जना मधुमेहका बिरामी मध्ये एकजना महिला रहने गरेको तथ्याङ्क छ । विश्वमा झण्डै ४२ करोड मानिस मधुमेह रोगबाट पीडित भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । मधुमेहका झण्डै ८० प्रतिशत विरामी विकासोन्मुख राष्ट्रका छन् । पहिले पहिले विकाशसिल राष्ट्रमा देखिएको मधुमेह केही वर्ष यता विकासोन्मुख राष्ट्रमा विकराल बन्दै गएको छ ।
जिवन यापनमा आइरहेको परिवर्तन , विलासी जिवलशैली तथा भौतिक मेहेनतको कमील्ो मधुमेहका रोगी दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
१ आनुवांशिक कारण , बाबु आमामा मधुमेह भएको खण्डमा छोराछोरीमा पनि सर्ने सम्भावना २० प्रतिशत रहेको चिकित्सक हरुले जनाएका छन् । तसर्थ अभिभावक बाट सन्तानमा मधुमेह सर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।
२ बढि मोटो रहनु र आवश्यक भन्दा बढि तौल हुदा मधुमेह हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।
३ भाइरसको संक्रमणः यो मधुमेहको प्रमुख कारक हो । प्यांक्रियाजको विटा कोश ९जसले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ ० मा भाइरसको संक्रमण हुदा इन्सुलिनको उत्पादन हुन सक्दैन जसको कारण मधुमेह हुन जान्छ ।
४ व्यायामको कमी , अस्वस्थ आहार विहार , उच्च रक्तचाप र रगतमा बढि कोलेस्टेरोल हुनु पनि मधुमेहका कारक हुन्।
क टाइप वानः यो सामान्यतया बालबालिकामा हुने गर्छ । जहा इन्सुलिनको उत्पादन सुन्य अर्थात अत्यन्त न्युन हुन्छ । रोगीलाई बचाउन कृत्रिम रुपमा इन्जेक्सनद्धारा इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ ।
ख टाइप टुः यो सामान्यतया प्रौढ अवस्थामा हुने गर्छ र विश्वमा भएका मधुमेही मध्ये धेरै यही प्रकारको मधुमेहका रोगी रहेका छन् । यसमा प्यांक्रियाजले कम इन्सुलिन उत्पादन गर्छ र सरिरले पनि इन्सुलिनको ग्रहण गर्न असक्षम हुन्छ । उमेर बढ्दै जादा यो प्रकारको मधुमेहबाट व्यक्ति ग्रसित बन्ने गर्छन् ।
ग जेस्टेसनल मधुमेहः गर्भबती महिलाहरुमा जुनैपनि बेला रगतमा चिनिको मात्रा उच्च हुनगइ मधुमेह हुनजान्छ । यस्तो प्रकारको मधुमेहलाई जेस्टेसनल मधुमेह भनिन्छ ।
१ छिटो छिटो पिसाव लाग्ने र तिर्खालाग्ने
२ बढि भोक लाग्ने , आखा तिरमिराउने
३ शरिरको वजन घट्ने , थकाइ महसुस हुने
४ वाकवाकी लाग्ने
५ लामो समयसम्म चोटपटक निको नहुने
५ हात खुट्टा झमझमाउनु , रिंगटा लाग्नु
१ इन्सुलिनको मात्रा यथावत राखी रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्न अस्पतालमा उपचार गरी खोपमार्फत नियमित इन्सुलिन लिने
२ रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने
३ खानामा विशेष ध्यान पुराउने , बढि कार्वोहाइड्रेट भएका खानेकुराको सेवन नगर्ने
४ धुम्रपान र मध्यपान त्याग्ने
५ बढि चिल्लो युक्त पदार्थको सेवन नगर्ने
६ सन्तुलित र नियमित भोजन लिने , नियमित व्यायाम गर्ने